Samsung kwupụtara ihe mmetụta 64MP ISOCELL Igwefoto Igwefoto | Gam akporosis
Anyị ga-ekwu maka ya Ihe ngosi ihe oyiyi ọhụrụ ISOCELL nke Samsung ruru 64pipixels nakwa na ọ ga-agba mbọ iji melite ogo nke foto nke ụdị Exynos ndị ahụ nke Galaxy S10. Foto nke na-anaghị akwụsị ịgbalite nke mere na anyị nwere ekwentị mkpanaka n'ọbụ aka anyị iji were ihe ngosi dị egwu.
Ọ bụ kpomkwem Samsung ISOCELL Bright GW1 64 megapixel sensor na ọ na-esonyere ya na ihe mmetụta ọzọ, ọ bụ ezie na nke a abụghị ihe karịrị 48pipixels. A nkwa niile nye akara Korea nke chọrọ ịpụta dịka otu n'ime ụlọ ọrụ iji tụlee maka ihe mmetụta maka igwefoto.
Ya mere, anyi nwere n’otu aka Samsung ISOCELL Bright GW1 64 megapixel na n'aka nke aka na 2pipixel ISOCELL Bright GW48. N'ime ụfọdụ ike ya bụ pikselụ pere mpe dị ka micrometers 0,8.
Etinye ngwoolu na aha "Bright", nke pụtara na-enwu gbaa n'asụsụ Bekee ma nwee njikọ ahụ na foto ahụ n'ọnọdụ ọnọdụ dị ala dị ala ebe ọ bụ ebe nnukwu ụdị nke ngwaọrụ mkpanaka na-alụ ọgụ. Karịsịa na omume ahụ enyere na "ọnọdụ abalị" nke ụfọdụ ụdị dịka Google, Huawei na nke ikpeazu nke sonyere dika Samsung.
Samsung na-ekwu na nkwupụta mgbasa ozi ya na iji pikselụ ndị ọzọ na teknụzụ dị elu, ihe mmetụta ISOCELL Bright GW1 na GW2 ga-ewetara ha ọkwa foto ọhụrụ iji nye gị ọzọ mobiles ihe doro anya na mma. Anyị ga-ahụ etu nke ahụ si sụgharịa, ebe ọdịiche dị n'etiti Exynos na Snapdragon ụdị nke Galaxy S10 na nke abụọ na-eme ụfọdụ ọdịiche na ọnọdụ ụfọdụ mgbe ijide njide.
una Samsung nke ka dị na agha agaghị ahapụ ohere ndị na-asọmpi ya na-aga n'ihu na-egosi ike, oge a nwere ihe igwefoto igwefoto ISOCELL.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung gosipụtara ihe mmetụta igwe ọhụụ ọhụụ ruru 64MP
Gbaa ịnyịnya gị hover osisi na-adịghị agwụ agwụ na-agba ọsọ NightStream
Ibe nke APP iji jikwaa nseta ihuenyo na gam akporo !!